Kali Linux zvakare inowanikwa kune Raspberry Pi vaviri | Linux Vakapindwa muropa
Kali Linux, "ethical kubiridzira" distro, zvakare inouya kune iyo Raspberry Pi 4
Anopfuura masvondo maviri apfuura, Rasbperry yakakanda iyo Raspberry Pi 4 Model B, yazvino vhezheni yebhodhi iyo yaigadzira. Iyo Raspberry Pi ine mavari zvese zvinodikanwa kuti zvishande sekombuta kana chishandiso chakangwara asi, kana izvo zvatiri kuda kuzvishandisa sePC, zvatichawana zvichave zvine hungwaru. Ndokusaka kune varikugadzira vanoburitsa chaiwo vhezheni yemabhodhi aya, akadai Ubuntu MATE kana Kali Linux.
Iyo Inogumbura Yekuchengetedza timu yakurumidza uye yatove neiyo ISO mufananidzo weako anoshanda system yakagadzirira iyo Rasipberry Pi 4 Model B, iyo inopa vekuchengetedza vaongorori uye vateveri vekubiridzira nzira iri nyore yekumhanyisa Kali Linux. Uye ndeimwe yemabhenefiti eiyo Raspberry Pi saizi inotibvumidza kutora yedu komputa / smart kifaa chero kupi. Ehezve, ramba uchifunga kuti iro rekutanga pasuru rinouya risina bhokisi kana chero tambo.
Kali Linux inobatana nemamwe masisitimu seRaspbian kana Ubuntu MATE
Kali Linux yeRaspberry Pi 4 inosvika ne yakavakirwa muWi-Fi yekutarisa modhi y Chimiro jekiseni rutsigiro rweyese system yekupinda kuyedzwa uye yetsika yekuba mabasa. Parizvino, chinokanganisa ndechekuti chete iyo 32-bit mufananidzo inowanikwa, asi Inogumbura Security timu inoona kuti iyo 64-bit vhezheni iri munzira.
Kali Linux yeRaspberry Pi 4 inowanikwa pa peji ino yewebhu. Zvine musoro, iyi sarudzo kune vashandisi vanoda kuyedza iyo zvishandiso zvehutsika inopihwa neiyi inoshanda system. Kana iwe uchifarira kushandisa yakanaka yekushandisa sisitimu yeRaspberry yako Pi 4, sarudzo dzakanakisa idzo dzataurwa pamusoro apa Raspbian, yakavakirwa paDebian uye kubva kukambani pachayo (Raspberry Pi Foundation), kana Ubuntu MATE, iyo Raspberry Pi vhezheni yeiyo hunhu Ubuntu mukuru MATE.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Kali Linux, "ethical kubiridzira" distro, inouyawo kune iyo Raspberry Pi 4
Yakaburitsa vhezheni itsva yeOpen Build Service 2.10, chikuva chekusimudzira kwekugovera uye software